Ipolisi yeemeko ongenakuzinceda iyasebenza kukubhukisha kwam ngexesha lobhubhane weCOVID-19? - Indawo Yoncedo yeAirbnb
Inqaku lethu elisemthethweni liyichaza ngokweenkcukacha indlela ipolisi yeemeko ongenakuzinceda esebenza ngayo xa kurhoxiswa ngenxa yeCOVID-19.
Ukubhukisha kwakho kuyafaneleka ukuba konke oku kuyinyani
Ubhukishe ngaphambi okanye ngoMatshi 14, 2020
kwaye usuku lokungena luphakathi kwangomso no 31 Oktobha 2020
Phawula: Ukuba ugula yiCOVID-19, ungarhoxisa phantsi kwale polisi kungakhathaliseki ukuba zithini iinkcukacha zokubhukisha kwakho ngokuqhakamshelana neqela labaxhasi bentsapho. Uza kucelwa ukuba ungqine oku ngamaxwebhu.
Bekubhukishwe emva koMatshi 14, 2020 okanye
Usuku lokungena lusemva ko31 Oktobha 2020 okanye
Ukuba awufaneleki uze urhoxise, imali oza kuyibuyiselwa iza kusekelwa kwipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe wakho ibe siza kukubonisa ixabiso lemali oyibuyiselwayo ngaphambi kokuba uqinisekise ukurhoxisa. Kule meko, imali emele ibhatalwe umbuki zindwendwe nemali emele ibuyiselwe kundwendwe ikhutshwa ngokwepolisi yokurhoxisa yombuki zindwendwe obuyamkele ngokuya ububhukisha.
Phawula: Xa ukubhukisha kurhoxiswa, uAirbnb unika umbuki zindwendwe nayiphi na imali amele ayibhatalwe aze abuyisele undwendwe imali olumele luyibuyiselwe ngokwepolisi yokurhoxisa yombuki zindwendwe. Ngenxa yeso sizathu, ukubhukisha okurhoxiswe ngaphambi kokwaziswa kwepolisi okanye ukwandiswa kwexesha esebenza ngalo akuzukuqukwa.
Siqhubeka siyijongile imeko yobhubhane weCOVID-19 ibe sizimisele ukukhupha inkcazelo ehlaziyiweyo ngale polisi nge-1 nange-15 yenyanga nganye. Ukuba ukubhukisha kwakho kuqala emva ko31 Oktobha 2020, nceda uphinde ujonge ngo1 Oktobha 2020 ukuze ufumane inkcazelo ehlaziyiweyo ngokufaneleka.
Phawula ukuba kusebenza iipolisi ezahlukileyo kubhukisho lwemimandla yaseTshayina kunye nakubhukisho lwezindlu zeLuxe okanye ezeLuxury Retreat.